Xcash စျေး - အွန်လိုင်း XCASH ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Xcash (XCASH)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Xcash (XCASH) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Xcash ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 249 244.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Xcash တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Xcash များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
XcashXCASH သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00004XcashXCASH သို့ ယူရိုEUR€0.00003XcashXCASH သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00003XcashXCASH သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00004XcashXCASH သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000357XcashXCASH သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00025XcashXCASH သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000881XcashXCASH သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000148XcashXCASH သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00005XcashXCASH သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00006XcashXCASH သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000889XcashXCASH သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000308XcashXCASH သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000213XcashXCASH သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00298XcashXCASH သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00671XcashXCASH သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00005XcashXCASH သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00006XcashXCASH သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00124XcashXCASH သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000277XcashXCASH သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0042XcashXCASH သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0471XcashXCASH သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0151XcashXCASH သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00292XcashXCASH သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0011
XcashXCASH သို့ BitcoinBTC0.000000003 XcashXCASH သို့ EthereumETH0.0000001 XcashXCASH သို့ LitecoinLTC0.0000007 XcashXCASH သို့ DigitalCashDASH0.0000004 XcashXCASH သို့ MoneroXMR0.0000004 XcashXCASH သို့ NxtNXT0.00285 XcashXCASH သို့ Ethereum ClassicETC0.000006 XcashXCASH သို့ DogecoinDOGE0.011 XcashXCASH သို့ ZCashZEC0.0000004 XcashXCASH သို့ BitsharesBTS0.00151 XcashXCASH သို့ DigiByteDGB0.00146 XcashXCASH သို့ RippleXRP0.000129 XcashXCASH သို့ BitcoinDarkBTCD0.000001 XcashXCASH သို့ PeerCoinPPC0.00014 XcashXCASH သို့ CraigsCoinCRAIG0.0177 XcashXCASH သို့ BitstakeXBS0.00166 XcashXCASH သို့ PayCoinXPY0.000678 XcashXCASH သို့ ProsperCoinPRC0.00487 XcashXCASH သို့ YbCoinYBC0.00000002 XcashXCASH သို့ DarkKushDANK0.0124 XcashXCASH သို့ GiveCoinGIVE0.084 XcashXCASH သို့ KoboCoinKOBO0.00868 XcashXCASH သို့ DarkTokenDT0.00004 XcashXCASH သို့ CETUS CoinCETI0.112